Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka feature tahay oo dhan, daaqadaha in waxa soo diyaariyey Microsoft ka Windows iyo wixii ka dambeeyey in hawlaha ay yihiin xiriira oo u shaqeeya ama nidaam u gaar ah oo ka mid OS lagu saleyn karaa kale ee XP ah mid ka mid ah si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in functionalities waxaa si fiican u bartay si loo hubiyo in aan kaliya hirgelinta noqdo fudud laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta natiijada sameeyo. Marka shaqeynayaan sida waa in mawduucyada waana in la ogaadaa in user ka dhigay kartaa mawduucyada daaqadaha 10 ilaa 7 iyo qeybsanaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in daaqadaha 8 iyo 8.1 ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in arrintan la xiriira si loo hubiyo in geedi socodka asaasiga ah waxaa laga dalbadaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale siinaya natiijooyinka ugu fiican marka raadinta la sameeyo ka hor inta geedi socod kasta waxaa la socda. Guud ahaan ratio guul ku xiran tahay xaqiiqda ah in geeddi-socodka waxaa la socda in sida uga wanaagsan ee suurtagalka ah iyo user helo natiijooyinka ugu fiican si loo hubiyo in kalsoonida gudahood OS ah waa la kordhiyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka ama xulashada theme ma aha heshiis weyn oo dhan iyo user waa lacag la'aan si ay u doortaan mawduuc sida doonistiisa ama rabitaan.
10 daaqadaha u qurux badan 10 mawduucyada daaqado 7
Beddelidda mawduucyada daaqadaha 7
Ka dib waxaa la kooxood ee ugu sareysa 10 mawduucyada daaqadaha 10 ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaqadaha 7 si aad u hubiso in user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira:
Waa mawduuc in la soo saaro by user ka jecel in ay aragto shaashadda kombiyuutarka madow ama uu doonayo hawlaha ay ku maamulaan deegaan yara mugdi ah. Sidoo kale waa mid ka mid ah mawduucyada ugu fiican in uu yahay u isticmaala nostalgic sida ay sidoo kale waa mid ka mid ah mawduucyada ugu horeysay loo abuuray daaqado 10 oo ku saabsan 6 bilood ka hor.
2. Aero siyasad
Version ayaa daba ee theme in markii hore ayaa loo abuuray daaqadaha 10 haatan waa taam kaamil ah daaqado 7 sidoo kale si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo kuwa kale ee isticmaala ayaa sidoo kale Fitzpatrick arrintan la xiriira sida ugu wanaagsan ee la sameeyey nidaamka.
3. Beel yar
Sidoo kale waa mid ka mid ah mawduucyada ugu fiican oo aad u hubiso in khayraadka nidaamka aan loo isticmaalin hab ugu badnaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in theme la soo bixi URL ku xusan sida versions nuqul ka dhigi ayaa sidoo kale waxaa jira in la isku qaldo user:
Sida magacaba ka muuqata mawduuca si gaar ah waxaa loogu talagalay dadka isticmaala ay jecel xarrago iyo fasalka iyo sabab la mid ah ay tahay waa kala soo bixi waayo, dhammaan dadka isticmaala kuwa doonaya in nidaamka si ay u ordaan habka ugu wanaagsan oo ay mid kasta inch kasta oo ka qayb software dhawraan ilaa calaamaddu ku taal,
Waxay soo saareen in la sameeyo nidaam fiirin sida dhaqanka mawduuca waa kan ugu fiican oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay nidaamka iyadoo la kaashanayo theme aan midabo at dhan laakiin waqti isku mid ah waa inuu xaqiijiyo in fasalka user ee la hayo habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah lagu muujiyey nidaamka ah in la isticmaalo:
Maqaarka waa inuu xaqiijiyo in user helo mid ka mid theme midabka leh ugu fiican in markii hore loogu talagalay daaqadaha 10 iyo functionalities fudud iyo aragti guud ayaa sidoo kale la hubiyo in user la Waali mawduuca. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in theme la soo bixi kaliya haddii Details nidaamka waa mid yara culus sida loo isticmaalo si Details nidaamka si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in nidaamka aan arrinta wax ka dhigi:
7. dekedda udib
Calanka toobiye anfacaya la design fudud yihiin wax taas oo mawduuca la og yahay oo dadka isticmaala ay sidoo kale ka soo dejisan waxaa sabab la mid ah. Waa in la ogaadaa in si loo hubiyo in wax soo saarka ay u korodho mawduuca waa in la soo bixi hubaal ah si loo badbaadiyo dadaalka iyo waqtiga labadaba:
Haddii user a waxaa u style iyo fasalka raadinaya markaas mawduuca waa in laga soo degsan oo lagu rakibay si loo hubiyo in khayraadka nidaamka aan looga faa'iideysan buuxda iyo waqti isku mid ah user helo natiijada ugu wanaagsan. Sidoo kale waa in e xusay in mawduuca la sameeyey iyada oo saameyn muuqaal ah oo smart walxood oo badhamada toobiye.
9. X cagaaran
Theme waa inuu xaqiijiyo in user waa jacayl leh midabka cagaaran iyo sidoo kale helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in lagu gundhig ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in midabka cagaaran waxaa jeclaa oo ag inta badan dadka.
10. X theme casaan
Sida cagaaran inta badan dadka ku jira ayaa sidoo kale jacayl la midabka guduudan sida u dhigan tahay jacayl iyo naxariis. Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala sida mawduuca anfacaya loo abuuray sida taam ah ugu fiican.
Waa in la ogaadaa in waxa soo socda waa hab ah in ay tahay in la raaco oo la xiriirta isbedel theme in daaqadaha 7:
1. desktop waa in ay xaq u riixi si ay u hubiyaan in doorasho ee shakhsiyeeyo la doorto:
2. qaybta theme ayaa markaa la arki karaa shaashadda soo socda:
3. user ayaa riixi kartaa theme si aad u codsato iyo inay ku dhameystaan ​​habka Dhameystiran:
AVI Player Bilaashka ah ee Windows 8: Si fudud Play AVI Files in Windows 8
> Resource > Windows > Top 10 Windows 10 mawduucyada for Windows 7